एनालग भर्सेस स्मार्ट वाच
त्यसो त सधैं साथमा रहने मोबाइलको डिस्प्लेमा समय, मिति, बार सबै हेर्न सक्ने सुविधा आएदेखि नै मेकानिकल अर्थात् एनालग वाचको बजार घट्ने अनुमान र हल्ला पनि चले । तर, त्यो हल्ला हल्लामै सीमित भयो । मोबाइलसँग ब्लुटुथको माध्यमबाट कनेक्ट गरेर विभिन्न फिचर प्रयोग गर्न सकिने स्मार्टवाच आएपछि पनि एनालग घडीको चलन पनि उत्तिकै छ ।
महँगो घडी बाँध्नुलाई प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा हेर्ने प्रचलन उद्योगपति, व्यापारी, नेतादेखि सर्वसाधारणसम्ममा पाइन्छ । कुनै समय नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको महँगो घडीको चर्चा पनि नेपालमा नभएको हैन । महँगा घडी उत्पादन गर्ने दर्जनौं कम्पनीहरु पनि छन् । नेपालमै पनि यस्ता घडीहरु उत्पादन हुन्छन् भने विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्र्याएर घडी बजारमा बेच्ने पनि गरिन्छ ।
सन् १९२० दशकमा जब विश्वमा रेडियोको व्यावसायिक प्रशारण थालियो, छापा पत्रकारिताको दिन सकियो भनियो । तर, सकिएन । सन् १९५० को दशकताका पनि यस्तै हल्ला भयो । विश्वभर टेलिभिजनको विकास भएपछि रेडियो प्रशारणको बजार घट्ने अनुमान त्यतिबेला गरियो । तर, त्यो पनि हल्लामै सीमित रह्यो । पछिल्ला दिनमा अनलाइनले बजार लिइरहँदा यस्ता हल्ला भए तर हाल सबै खालका मिडिया आफ्नो अस्तित्व कायम राखेर चलिरहेका छन् । हो, यस्तै अनुमान भइरहको छ वाच (घडी) बजारमा पनि ।
यसो त सधैं साथमा रहने मोबाइलको डिस्प्लेमा समय, मिति, बार सबै हेर्न सक्ने सुविधा आएदेखि नै मेकानिकल अर्थात् एनालग वाचको बजार घट्ने अनुमान र हल्ला पनि चले । तर हल्ला हल्लामै सीमित भयो । मोबाइलसँग ब्लुटुथको माध्यमबाट कनेक्ट गरेर विभिन्न फिचर प्रयोग गर्न सकिने स्मार्टवाच आएपछि पनि एनालग घडीको चलन पनि उत्तिकै छ ।
बरु स्मार्टवाचका डिस्प्लेहरु झट्ट हेर्दा पुराना घडीका जस्ता राख्ने चलन छ । एनालग वाच जस्ता देखिने स्मार्टवाच र वास्तवमै मेकानिकल मेसिनरि तरिकाले चल्ने पुराना घडीहरुको बजार यतिबेला सँगसँगै अगाडि बढेको छ । एनालग घडीहरु लाखौं मूल्य पर्नेसम्मका छन् भने स्मार्ट वाच पनि करिब एक लाखसम्मका मूल्य पर्ने स्तरका आउन थालेका छन् । यद्यपी पुराना नयाँ दुबै घडीले एक अर्कालाई विस्थापित गरेका छैनन् बरु निरन्तर आफ्नो बजार विस्तारमा लागेका छन् ।
घडी एकातिर समय हेर्ने माध्यम त छँदैछ तर कतिपयले सोखका रुपमा पनि यसको प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । रोलेक्स, सिको फाइभ, जिमिनी जस्ता चल्तीका ब्रान्डका महँगा घडी लगाएर आफ्नो सान बढेको महसुस गर्ने समुदायदेखि एप्पल वाचको पछिल्लो सिरिज हातमा बाँधेर सान देखाउने खोज्नेको पनि कमी छैन । रुची आ–आफ्नो हो । रुची अनुसार सबैको आ–आफ्नो ठाउँमा महत्व छ ।
सय रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म पर्ने एनालग घडीमा पनि कतिपय ब्याट्रिबाट चल्नेदेखि नाडीको चालबाट चल्नेसम्मका सुविधामा पाइन्छन् भने स्मार्ट वाचमा पनि एक दिन ब्याट्री टिक्नेदेखि एक महिना ब्याट्री टिक्नेसम्मका पाइन्छन् । दसैं, तिहार र छठलगायतका चाडपर्व मोबाइल, घडी वा स्मार्ट वाचको खरिद गर्ने समय पनि हुन् । आफ्नो लागि र आफन्तका लागि उपहारका लागि घडी खरिदको बारेमा सोच बनाउनु भएकाले उपभोक्ताका लागि केन्द्रीत भएर स्मार्ट वाच, एनालग वाच र फिटनेस ट्रयाकरका ट्रेन्डका बारेमा यहाँ स्पष्ट पार्ने कोसिस गरिएको छ ।
घटेको छैन मेकानिकलको क्रेज
मेकानिकाल वाच अर्थात् एनालग घडीको मार्केट पनि उत्तिकै चलि नै रहेको छ । फरक यति हो की निकै सस्तो मूल्यका डुब्लीकेट घडीमा पैसा हाल्नुको साटो बरु नेपालीहरु बढी पैसा हालेर भए पनि राम्रै गुणस्तरको घडी लगाउन इच्छा गर्ने गरेको अनुभव व्यवसायीहरुको छ । र, यस्ता टिकाउ खालका घडीहरु एक सयदेखि दशौं लाख पर्नेसम्मका छन् ।
हेर्दा आकर्षक लाग्ने मेकानिकल घडीहरु लामो समयसम्म ब्याट्रि चल्ने र कतिपय विना ब्याट्रिसमेत चल्ने भएकाले पनि निकै उपभोक्ताहरुले यस्ता घडी बाँध्ने गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरो मूल्यमा पनि जुन तहको किन्न खोज्यो, त्यसै तहको मूल्यमा पाइने भएकाले पनि यस्ता घडीहरुको क्रेज घटेको छैन । नेपाली बजारमा पाँच सयदेखि माथि मूल्यका टिकाउ खालका घडीदेखि बसपार्क क्षेत्रमा हातहतमै बेचिने कमसल घडीहरु पनि पाइन्छन् ।
महँगो घडी बाँध्नुलाई प्रतिष्ठाको विषयका रुपमा हेर्ने प्रचलन उद्योगपति, व्यापारी, नेतादेखि सर्वसाधारणसम्ममा पाइन्छ । कुनै समय नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको महँगो घडीको चर्चा पनि नेपालमा नभएको हैन । महँगा घडी उत्पादन गर्ने दर्जनौं कम्पनीहरु पनि छन् । नेपालमै पनि यस्ता घडीहरु उत्पादन हुन्छन् भने विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्र्याएर घडी बजारमा बेच्ने पनि गरिन्छ । विश्वमा महँगा लग्जरी घडीहरु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुमा स्वीट्जरल्यान्डका कम्पनीलाई अग्रणी मानिन्छ भने विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्ता घडी उत्पादन हुन्छन् ।
रोलेक्स, ओमेगा, आइडब्लुसी, कार्टियर, पानराइ, पाइगेट, क्वार्चदेखि सिको भाइभसम्मका दर्जनौ ब्रान्डका घडी बजारमा पाइन्छन् । एक डलरदेखि दशौं लाख डलरसम्मका घडी बाँध्ने हातहरु पनि विश्वमै छन् । तपाईं काठमाडौंमा हुनुहुन्छ भने दरबारमार्ग क्षेत्रमा महँगा ब्रान्डका घडी किन्न जान सक्नुहुन्छ भने मध्यम ब्रान्डका घडी काठमाडौंको विशाल बजार, सिभिल मल, काठमाडौं मल लगाएतका मलहरुमा पाइन्छन् भने मुलुकभरका घडी पसलमा आवश्यकता अनुसार घडी किन्न पाइन्छन् ।
स्मार्टवाच : एप्पलदेखि अमेजफिटसम्म
मेकानिकल वाच जस्तै स्मार्टवाचका लागि पनि अब दर्जनौं कम्पनीले ठूलो लगानी गरिसकेका छन् । स्मार्ट वाचको विशेषता भनेकै स्मार्टफोनसँग कनेक्ट गरेर फोन, म्यासेज रिसिभ गर्नेदेखि कल गर्नेसम्म, म्युजिक सुन्न मिल्ने, फिटनेस ट्रयाकरको काम गर्ने लगाएतका छन् । निर्माता कम्पनी, ब्रान्ड र सिरिजका आधारमा सुविधा थपघट हुन सक्छन् । यद्यपी सबैखाले स्मार्टवाचले यात्रा, व्यायाम, मुटुको गति नाप्ने र विभिन्न विकल्पमा घडीको अगाडिको भागको चित्रहरु परिवर्तन गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएका हुन्छन् ।
विश्वकै महँगो प्रविधि कम्पनीको महँगो स्मार्टवाचदेखि अमेजफिटको मिडरेन्ज स्मार्टवाचसम्म विश्वबजारमा आएका छन् । एप्पलले चार वर्षदेखि स्मार्टवाच भर्सन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
हालै मात्र एप्पल वाच सिरिज फोर बजारमा ल्याएको एप्पलको वाच महँगो वाचमा पर्दछ । वाच सिरिज फोरको मूल्य भारतमा नै भारु ४० हजारबाट सुरु छ । यसको मुख्य विशेषता फोन, म्यासेज गर्नदेखि विभिन्न एपहरु मोबाइलमै चलाउन मिल्नु हो भने ब्याट्रि कम टिकाउको समस्या भने एप्पलको पुरानै हो । नेपालमा यसको मूल्य ६५ देखि ७० हजारको बीचमा पर्छ । एप्पलका पुराना सिरिजहरु पनि कम्तिमा ३० हजारमाथिका छन् । महँगो भए पनि पछिल्ला दिनमा एप्पलको वाच लगाउने नेपाली हातहरु पनि बढिरहेका छन् ।
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक र नेपालमा भने विस्तारै स्मार्टवाचको ट्रेन्ड चल्दैछ । यद्यपि एप्पलवाचका पछिल्ला सिरिजदेखि अन्य ब्रान्डका स्मार्टवाच लगाउनेको संख्या बढ्दो छ । नेपालमा स्मार्टवाचको बजार बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण भने मूल्य नै हो । मध्यम स्तरको स्मार्टवाच किन्नु पर्यो भने पनि कम्तिमा दश हजार खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, ‘दश हजारमा पनि वाच? बरु मोबाइल नै किन्ने नि’ भन्ने मानसिकता उपभोक्तामा बढी भएको भन्दै व्यवसायीहरु पनि स्मार्टवाचमा लगानी कम गरिरहेका छन् । एप्पलका हाराहारिको सुविधा उपलब्ध भएको मध्यम सिरिजको स्मार्टवाच हो अमेजफिट । जसले भारतमा औपचारिक बजार विस्तारमा लागि सकेको छ भने नेपालमा पनि यसको उपस्थिति छ । हालसम्म चार वटा सिरिज ल्याइसकेको चिनियाँ साओमी कम्पनीको सहायक कम्पनी अमेजफिटको स्मार्टवाच दश हजारदेखि ३० हजारसम्मको मूल्य रेन्जमा पाइन्छन् ।
विश्वको सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन बिक्री गर्ने कम्पनी सामसङले पनि स्मार्टवाचका विभिन्न सिरिजहरु बजारमा ल्याइरहेको छ । पाँच वर्षदेखि स्मार्टवाच बजारमा प्रवेश गरेको सामसङका दश वटा सिरिज विश्व बजारमा आएका छन् । सुरुको सामसङ गेयरदेखि गेयर टु, गेयर फिट, गेयर लाइभ, गेयर एस, गेयर एस टु, गेयर फिट टु, गेयर थ्रि, गेयर एस थ्री र गेयर स्पोर्ट हुँदै गेयर फिट टु प्रोसम्म यसका पछिल्ला उत्पादन हुन् ।
पछिल्ला गेयर सिरिजमा ३६० डिग्री फोटो खिच्न मिल्ने फिचर बढी चर्चामा छ । उता मोटोरोलाको ... देखि फिटविटको फिटविट आइकोनिक, एलजीको वाच स्पोर्ट, फोसिलको क्यु भेन्चर एस आर, गार्मिनको फोरिनुनर ६४५ म्युजिक, मोबभोइ टिकवाच प्रो, हुवावे वाच टु, मोटोरोल्ला ३६० लगाएतका चलेका कम्पनीहरु स्मार्टवाच उत्पादनमा लागिरहेका छन् । नेपाली बजारमा १–२ हजारमा पाइने कमसल खालका स्मार्टवाच पनि पाइन्छन् तर यी ब्रान्डेड जस्ता भरपर्दो हुँदैनन् ।
स्मार्टवाचको विकल्प स्मार्ट ब्यान्ड
नयाँ उत्पादन भएको र मूल्यमा पनि महँगो भएकाले नेपालमा स्मार्ट वाचको मार्केट त्यति बढ्न सकेको छैन । तर, यसको विकल्पमा फिटनेस ट्रयाकरहरु भने बग्रेल्ती पाइन थालेका छन् । चेप्टो आकारमा हेर्दा सानो हुने भएकाले ब्यान्डलाई स्मार्टवाचको रुपमा स्वीकारिँदैन । यद्यपी स्मार्ट वाचका कतिपय फिचर स्मार्ट ब्यान्डमा पनि पाइन्छन् । यस्ता एन्टिभिटी ट्रयाकर, फिटनेस ब्याण्ड, स्मार्ट ब्याड, एक्टिभिटी मनिटर विभिन्न नामले चिनिने यी स्मार्ट फिटनेस ब्याण्डले स्मार्ट घडीको काम त गर्छन् नै । तपाईंको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले तपाईंका हरेक गतिविधिलाई ‘ट्रयाक’ गरेर तपाईंको अवस्था चित्रण पनि गर्ने गर्छन् ।
स्मार्ट ब्यान्ड पनि समय, मिति देखाउने देखि मेसेज हेर्न र फोन आएको थाहा पाउन मिल्ने खालका हुन्छन् । यसमा जोडिएको सेन्सरको सहायताले मुटुको गति, हिँडेको पाइला, हिँडेको किलोमिटर, दौडाइ, बाइक वा गाडीमा हिँडेको अवधी आदि विषयमा सूचना तथा संकलन गर्नुका साथै यी सबै काम गर्दा तपाईंको क्यालोरी कति खर्च भयो भन्ने हिसाब समेत राख्छन् ।
बिहान–बिहान मर्निङ वाकमा हस्याङ फस्याङ गर्नेदेखि जिमखानामा जिम गरिरहेका युवाहरुका हातमा फिटनेस ब्याड बढी देख्न सकिन्छ । ‘हेल्थ कन्सियस’ युवाहरुले पछिल्लो समयमा फिटनेस ब्याण्डको प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । आवश्यकता भन्दा बढी तौल भई मोटोपना घटाउने सोच भएकादेखि स्मार्टवाचको सोख भएकाहरुले फिटनेस ब्याण्डको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । चौबिसै घण्टा शरीरलाई ट्रयाक गर्ने भएकाले पनि यस्ता ब्याण्डलाई फिटनेस ट्रयाकरका रुपमा लिने गरिन्छ ।
फिटनेस ब्याण्ड वा ट्रयाकरका बारेमा जानकारी लिई नसकेका धेरैले सोध्ने प्रश्न हो फिटनेस ब्याण्ड र स्मार्टवाचमा फरक के त ? स्मार्ट टेक्नोलोजीमा आधारित घडीलाई स्मार्ट वाच भनिने भएको र फिटनेस ब्याण्ड पनि झट्ट हेर्दा घडी नै जस्तो देखिने भएकाले यस्तो दोधार रहनु स्वभाविक पनि हो । फिटनेस ब्याण्ड सस्तोदेखि महँगोसम्मको आधारभूत काम र मूल्य अन्तर कम देखिन्छ । नेपाली बजारमा हजार रुपैयाँदेखि ५–७ हजारसम्मका स्मार्ट ब्यान्ड पाइन्छन् । ब्यान्डमा साओमीको एआइ ब्यान्ड, ब्यान्ड टु, ब्यान्ड थ्री लगाएतका सिरिज छन् भने फिटविट, लेनेभो, जर्मीन, फास्ट ट्रयाक लगाएत दर्जनौं कम्पनीका फिटनेस ब्यान्ड बजारमा पाइन्छन् ।
बियर कम्पनीले इजरायली साइबर सेक्युरिटी युनिट राख्ने
‘टेक डिप्लोमेसी’को चेपमा भारत
भ्वाइस कमान्ड फिचरसहितको ‘मी ब्यान्ड–४’